Ao Amin’ny Telegram, Mivadika Ho Vola Ny Politika Rosiana Sy Ny “Memes” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2017 5:17 GMT
Manana an'arivony maro mpamandrika azy ireo ‘fantsona’ Telegram malaza indrindra. Pikantsary avy amin'i Alexey Kovalev
Miaraka amin'ireo 90.000 mpamandrika azy, tsy hoe iray fotsiny amin'ireo malaza indrindra tokana fividianana ireny fampiasa hanamboarana sary mahatsikaiky (memes) amin'ny teny Rosiana ireny ny fantsona Telegram “MDK”. Fandraharahana ara-barotra mampidi-bola ihany koa izy.
Nolazain'ny mpandrindra ny MDK tamin'ny RuNet Echo fa ampandoaviny 25.000 robla ($420) ny doka iray apetraka ao amin'ny fantsony, sehatra iray fanoratana bilaogy mampivady ny an'ny Facebook sy ny kaonty Twitter. Tsy anehoany hevitra ny momba ny habetsaky ny vola azony amin'ilay fantsona, saingy lazain'ireo loharano avy amin'ny media Rosiana fa ireo fantsona malaza be toy ny MDK dia afaka mampiditra hatramin'ny 1 tapitrisa robla isambolana ($17,000). Na izany aza, mbola bitika io raha miohatra amn'ny hafa, ireo fantsona somary politika kokoa.
Ny firoborobon'ireo fantsona Telegram no iray amin'ireo vokatry ny fitomboan'ny lazan'ilay fampiasa noforonin'i Pavel Durov, ilay mpandraharaha ao ambadiky ny Vkontakte, dika Facebook izay mibahan-toerana amin'ny tontolon'ny media sosialy Rosiana.
Ireo fampiasa malaza indrindra ao Rosia pic.twitter.com/X2uHDQfj1o
Rafitra iray miavaka ireo fantsona Telegram ahafahan'ilay fampiasa ihany koa ho azo ampiasaina tahàka ny sehatra fanoratana bilaogy: afaka misoratra anarana hanana fantsona iray daholo ny rehetra, saingy fotsiny afaka mandefa zavatra eo aminy koa ny mpamorona ny fantsona. Tato anatin'ny taona roa, nalaky nitombo habe sy isa ireo fantsona, ary amin'ny tranga sasany dia lasa asa fandraharahana goavana. Iray amin'ireo fantsona malaza indrindra ao amin'ny Telegram no nibahana ny lohateny vaventy teny anatin'reo gazety Rosiana tamin'ny Septambra 2017 rehefa namidy 5,5 tapitrisa robla (US$95,000) raha herinandro monja taorian'ny nanaovan'ny tompony tolobidy 1,2 tapitrisa (US$20,000).
Mety hampisavoritaka ihany anefa ny lafiny ara-barotr'ireo fantsona. Izany dia noho izy ireo voaporofo fa manintona, tsy hoe fotsiny ho ho amin'ireo tranonkalam-baovao sy toerana fanangonana sary mahatsikaiky, fa koa ho aminà marika vaovaonà bilaogera tsy mitonona anarana sy manokan-tena ho an'ny politika ary mamboraka ny zavatra lazain'izy ireo fa “fampitàmbaovao avy ao anatiny” mikasika ny politikan'i Kremlin.
Ny 27 Septambra, notaterin'ny Vedomosti, gazety mpiseho isananadro miresaka fandraharahana Rosiana, fa nivadika ho tsena iray vaovao ho an'ny “dokambarotra politika” ireo fantsona Telegram, tamin'ny filazàna fa vonona ny handoa hatramin'ny 450.000 robla (US$7,500) ireo mpisehatra politika mba ho afaka mandefa fampitam-baovao politka amin'ireny fantsona ireny. Mpandrindra iray avy amin'ny fantsona politika “Karaulny”, izay manana mpamandrika 26.000 no nilaza tamin'ny RuNet Echo hoe ny tolotra ho fandefasana fampitam-bavao ao amin'ny fantson-dry zareo dia miainga eo amin'ny 50.000 hatramin'ny 150.000 robla ary saiky miresaka “fifandiranà orinasa,” saingy tsy nanehoan-dry zareo hevitra ny hoe nanaiky na tsia ireo tolotra izy ireny.
Tsy lazain'ny lahatsoratr'i Vedomostiny karazana torohay sy fampitam-baovao navoaka tamin'ny alàlan'io karazana vola io, na tanisainy aza ny loharano iray milaza ny famoahana “torohay miiba / ratsy” (fantatra ihany koa amin'ny hoe “black PR”) izay mety hisanda avo roa na telo heny noho ny fanaovana dokambarotra miabo / tsara kokoa.
Ireny sandany ireny dia mety nateraky ny finoana tsy mitsahatra mitombo hoe mahasarika mpamaky tsy mivadika aminy any amin'ireo Rosiana mpitondra ambony ao amin'ny fanjakàna ireny fantsona ireny. Ny Janoary 2017, nolazain'ny Ura.ru, mpamoaka vaovao ao an-toerana, fa efa lasa fahazarana isanandro ny mamaky ireo fantsona Telegram mandritra ny fivoriana fohy rehefa maraina sy ireo fihaonan'ny Solombavambahoaka ao amin'ny Domà ary any amin'ireo kabinetranà ministera isan-tsokajiny. Tamin'ny Septambra, naboraky ny Vedomosti ihany koa hoe niharan'ny fanarahamason'ny Sampandraharaha Federaly ao Rosia sy ny ministeran'ny atitany ary ny fiarovana ireny fantsona ireny.
Noho ny firongatry ny fampitam-baovao misy betsaka sy ireo tsy mbola nisy nizara mihitsy, marobe ireo fantsona politika tsy mitonona anarana no lasa loharano fanaovana topimaso momba ny politika Rosiana tato anatin'ny taona vitsy, na miteraka resabe aza. “Nezygar,” ny malaza indrindra amin'ireny fantsona ireny, dia nahatafakatra ny isan'ireo 16.000 mamandrika azy tany am-piandohan'ny taona ho lasa maherin'ny 72.000 tamin'ny Septambra.
Io laza tsy mitsahatra mitombo io ihany koa dia nisarika kiana momba ny tsy fisian'ny mangarahara ilomanosan'ireny fantsona tsy mitonona anarana ireny. Tamin'ny Janoary i Oleg Kashin, Rosiana mpanao gazety ary mpampiasa mavitrika ny Telegram ihany koa, nilaza tamin'ny fantsom-pahitalavitra “Rain TV ” hoe “Raha manana mpahay siansa politika tsara i Rosia, asa fanaovana gazety politika mavitrika sy matanjaka, media tsy miankina, tsy ho nisy akory ny tranga ‘Nezygar’.”
Satria tsy ireo fantsona monja ihany fa hatramin'ireo mpiasam-panjakàna ambony koa izay lazaina fa mamaky azy ireny no, amin'ny tranga maro, tsy mitonona anarana, dia mitoetra ny ahiahy momba ny tena fandresen-dahatra aterak'izy ireny marina tokoa, raha mitosaka ireo tombatombana momba izay niaviany. Saingy na toa inona izy ireny, araka ny loharano iray tanisain'ny Vedomosti, “kilalaon” ny departemanta politika anatiny ao Kremlin na media iray vaovao ho an'ireo manampahaizana manokana momba ny politika, zavatra iray loha no toa mazava: fandraharahana iray mahavelom-bolo ilay izy.